Yaa’iin Qorannoo fi Qorannoo ‘TB’11ffaan har’a Magaalaa Dirree Dawaatti jalqabama
Monday, 21 March 2016 11:38
Finfinnee: Bitootessa 12, 2008 (oromiapo) Yaa’iin Qorannoo fi Qo’annoo ‘TB’ 11ffaa har’aa jalqabee guyyoota afuriif Magaalaa Dirree Dawaatti geggeeffama.
Hogganaan Biiroo Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa Doktar Muluuqan Argaaw akka jedhanitti, yaa’icha irratti dhaabbileen ‘TB’ irratti qorannoo fi qo’annoo geggeessan bu’aalee qorannoo fi qo’annoo 65 dhiheessanii mariin irratti geggeeffama.
Yaa’icha irratti barnoonni ‘TB’ dawaan wal-baree fi ‘TB’ sadarkaa idil-addunyaatti gaariitti ittisuu dandeessisu akka kennamu eegama.
‘TB’ gama ittisuutiin naannoleen hundi hojilee raawwatan dhiheessanii muuxannoo wal-jijjiiru jedhameera.
Yaa’icha malees mata duree” Hunda Haa Qaqqabnu ‘TB’n du’uun haa Ga’u’ jedhuun guyyaan ‘TB’ akka biyya keenyaatti si’a 19ffaaf sadarkaa idil-addunyaatti ammoo si’a 34ffaaf Yuunivarsitii Haramayaatti kabaja; Tajaajila Oduu Itiyoophiyaatu gabaase. FBC
More in this category: « Shaampiyoonaa mana keessaa addunyaa Itiyoophiyaan sadarkaa lammaffaa qabattee xumurte Daandin Qilleensichaa ogeeyyii xiyyaara suphan biyyoota Afrikaaf erguu jalqabe »
Torbe Kana 1706
Ji'a Kana 1706
01/05/07 irraa eggalee 3422877
Kan Amma Daawwachaa Jiran 36